I-China Standing Glass Weight Scale CW269 Manufacture and Factory |I-AOLGA
• 30CM*30CM iplathifomu yengilazi eqinile enosayizi omkhulu, ikhululekile ukuma ukuze ikale, futhi ifanele iningi labantu abanosayizi abahlukene bezinyawo.
4 inzwa ephezulu ezwelayo
• Inzwa engu-4 ezwelayo ephezulu ezinyaweni zesikali iletha ukunemba okuphezulu nephutha elincane.
Isibonisi se-LED esingabonakali
• Isibonisi se-LED esingabonakali phezulu, futhi akukho ukukhanya kwe-LED okungabonwa uma kungasebenzi ngenkathi i-LED izovela uma uyikala, okuyenza ihlanzeke kakhulu.Ngokuvamile, isikali esimhlophe sine-LED emhlophe kuyilapho isikali esimnyama sine-LED ebomvu.
Ukunemba okuphezuluisikali sokukala:
• Ingilazi yamanzi ingezwa kahle futhi inani lokuthweswa iziqu libe ngu-10g kuphela.
I-chip esebenza kahle kakhulu:
• Ukusebenza kwesivinini esikhulu, akukho ukulinda, ukusebenza kahle kakhulu.
• Ukukhanya okucacile nokuthambile nakho kuyatholakala ebusuku
• Ihlanganiswe nesilinganiso lapho kungasebenzi, futhi ukufundwa kuboniswa ngokucacile lapho kukalwa.
• Isibonisi se-LED esifihliwe, ukufundwa okucacile emini nasebusuku.
Ukushintsha okuzenzakalelayo okuhlakaniphileKHANYISA CISHA:
• Ukushintsha okuzenzakalelayo VULIWE/KUVALIWE kushiya umklamo weswishi owenziwe ngesandla futhi uthuthukela ekubeni inzwa yamandla adonsela phansi ehlakaniphile, elula futhi ewonga amandla.
Indawo enesisindo ehlanganisiwe:
• Ubuhle obuhlelwe kahle, indawo yesikali esikhulu, ukukala okunethezekile.
Ilula, ihlangene futhi ilula:
• Ngaphandle kokubukeka okukhulu, umzimba omncane ungabanjwa kalula.
• Ingagcinwa kalula kunoma iyiphi indawo, elula futhi enhle.
Amandla anamaphuzu amane:
• Isakhiwo samaphuzu amane kanye nokuxhumeka kohlobo lwebhuloho kuletha amandla amakhulu.
Idizayini yokubukeka komuntu:
1. Amakhona ayindilinga amakhulu enziwe ngesandla, abushelelezi futhi athambile, anciphisa ukulimala kokushayisana.
2. Amaphedi ezinyawo ezilwa nokushelela kanye nezinyawo ezinesisindo senjoloba ephansi adonsela phansi akwenza kuzinze futhi kunqande ukushushuluza ukuze kube nokuphepha okuphindwe kabili.Izingxenye ezibalulekile zivikelwe impilo ende.
3. Izinto ze-polymer ezansi.
4. Ukubumba kwesiqephu esisodwa, kungangenisi uthuli kanye nobufakazi bomswakama ukuze kuvikelwe izingxenye eziyinhloko
Izinto ezikhethiwe zokuqinisekisa ikhwalithi ephezulu:
• Ingilazi eqinile eqinisiwe yezinga lezakhiwo inokumelana nomthelela omuhle kanye nokumelana nengcindezi ephezulu.
• Indawo yesikali esibushelelezi yenziwe kahle, futhi umuzwa wekhwalithi uyathuthukiswa
• Ingxubevange ye-Aluminium
Ingilazi efudumele ye-ABS+
2x1.5V AAA ibhethri
Okwedlule: I-BLDC Motor Hair Dryer RM-DF06
Olandelayo: I-Glass Electronic Weight Scale CW280
I-Balance Weight Scale
I-Free Weight Scale
Isikali Esincane Sesisindo
I-Standing Weight Scale
Isikali Sokukala Isisindo
Isisindo Isikali Kwabesifazane
Isikali Sesisindo Esikala Amafutha Omzimba
I-Capsule engu-0.6L ekhishwayo...
I-Electric Steam Iron SW...